August 10, 2019 - ThutaSone
ယနေ့ နောက်ဆုံးရ မိုးလေဝသ ခန့့်မှန််းချက််
August 10, 2019 ThutaSone 0
ယနေ့ နောက်ဆုံးရ မိုးလေဝသ ခန့့်မှန််းချက်် ကျန််းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။ ၁၀-၈-၂၀၁၉ ည(၈းဝ၉)နာရီ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့ အတ ွွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်် တ ွင် မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု အ ခြေ အ နေ။ မရှိပါ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် […]
မြန်မာလူမျိုး တချို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြားရသူတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ
ကြားရသူတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုး တချို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ဂျပန်​မှာ ဆူနာမီဖြစ်​ခဲ့တယ်​.. သူတို ့နိုင်​ငံသားအချင်​းချင်​းဆိုတဲ့ စိတ်​ဓာတ်​နဲ့ စတိုးဆိုင်​​တွေဟာ ကုန်​ပစ္စည်​း​တွေကို အလကားယူဖို ့ခွင်​့ပြုကြတယ်​။ အင်​ဒိုနီးရှားမှာ မီး​တောင်​​ပေါက်​ခဲ့တယ်​.. ​နေအိမ်​အ​ဆောက်​အုံပျက်​စီးသွားတဲ့ သူတို့နိုင်​ငံသား​တွေအတွက်​ ​ဆောက်​လုပ်​​ရေးသုံးပစ္စည်​းဆိုင်​​တွေဟာ တန်​ဖိုးရဲ့ ၂၅% နဲ့​စျေး​လျော့ ​ရောင်​း​ပေးကြတယ်​။ အ​မေရိကန်​မှာ မုန်​တိုင်​း​တွေအကြီးအကျယ်​တိုက်​ခဲ့တယ်​.. […]
ကစ်ကစ်၊ မနွယ်နီနဲ့ မလုံးတင်ကိုဇော်ကြီ တို့ အတွက် ငွေ(၅)သိန်းစီ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ကစ်ကစ်၊ မနွယ်နီနဲ့ မလုံးတင်ကိုဇော်ကြီ တို့ အတွက် ငွေ(၅)သိန်းစီ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်က ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီး အခုဆိုရင် အကယ်ဒမီဆုကြီးနှစ်ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိတဲ့ထိ အောင်မြင်နေသူတစ်ဦးပါပဲ။ သူမရဲ့ ထူးခြားပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်ကြောင့် အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားပြီး […]
ဒီကနေ့တရုတ်မှာ အင်အားကြီးတိုင်ဖုန်းဝင်ရောက် ၊ လူ ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွေ ့ပြောင်းနေရ
ဒီကနေ့တရုတ်မှာ အင်အားကြီးတိုင်ဖုန်းဝင်ရောက် ၊ လူ ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွေ ့ပြောင်းနေရ Lekima တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို ဒီကနေ့မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မုန်တိုင်းကြောင်း ၁၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၆ ယောက် ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူဦးရေး ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာကို […]
ကွာတားဖိုင်နယ်တက်သွားခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ ကြက်တောင်အားကစားကနေမြန်မာ့ကြက်တောင်လောကအတွက်အောင်မြင်မှုတွေယူပေးနေတာကတော့သက်ထားသူဇာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ကာပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုဆုတံဆိပ်တွေကိုဆွတ်ခူးပေးပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်၈၃နေရာမှာရပ်တည်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ခုမှာလည်းဂရိနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Hellas Open 2019 ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့လက်ရည်စစ်ပြိုင်ပွဲကနေဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတာဖြစ်ပြီး ခုမှာလည်း၃၂ယောက်နဲ့၁၆ယောက်အဆင့်ရှုံးထွက်တွေကိုဖြတ်ကျော်အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ဟန်ဂေရီနဲ့ပိုလန်ကစားသမားတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ကွာတားဖိုင်နယ်မှာလည်း ယူကရိန်းနိုင်ငံသူနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေလည်းနိုင်ငံတစ်ကာမှာအောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးပြီးမြန်မာဂုဏ်ဆောင်နေတဲ့သက်ထားသူဇာကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော်။ Source:မြန်မာ့ကြက်တောင်အားကစားသမားများ
ဒီနှစ်မှမုန်တိုင်းက ၄ လုံးလောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်’
မုန်တိုင်းက ၄ လုံးလောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်’ ‘စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေ ရိတ်ချိန်သိမ်းချိန်မှာ မုန်တိုင်းက ၄ လုံးလောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်’ (မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်နှင့်အင်တာဗျူး) ယနေ့ရာသီဥတုသည် တကမ္ဘာလုံး၌ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုသည်လည်း လွန်ခဲ့ပြီးသောနှစ်ကာလများနှင့် လုံးဝမတူတော့ပါ။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း ပို၍ပို၍ သိသာလာပါသည်။ […]
ယနေ့ ကျောက်ပန်းတောင်း ပုံဂံညောင်ဦးလမ်း ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းအကျော် ချောင်းများ ရေကျနေပါသဖြင့် အထူးသတိပြုသွားလာကြပါရန်… ကားအစီး ၂၀၀. ​ကျော်​ ပိတ်​မိ​နေ
ယနေ့ ကျောက်ပန်းတောင်း ပုံဂံညောင်ဦးလမ်း ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းအကျော် ချောင်းများ ရေကျနေပါသဖြင့် အထူးသတိပြုသွားလာကြပါရန်… ကားအစီး ၂၀၀. ​ကျော်​ ပိတ်​မိ​နေ ကျောက်ပန်းတောင်း ပုံဂံညောင်ဦးလမ်း ယနေ့ ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းအကျော် ချောင်းများ ရေကျနေပါသဖြင့် အထူးသတိပြုသွားလာကြပါရန်… . ကားအစီး ၂၀၀. ​ကျော်​ ပိတ်​မိ​နေ… Photo Win […]
မြေပြိုစဉ် မိသားစုဝင် ၇ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်
မိသားစုဝင် ၇ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ် မိသားစုဝင် ၇ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပေါင်မြို့နယ် သဲဖြူကုန်းကျေးရွာသား တစ်ဦးက မြေပြိုစဉ် မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဘီဘီစီကို ခုလို ပြောပြထားပါတယ်။သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေပြိုမှုကြောင့် […]
ဒီနေ့ သေဆုံးတဲ့သူ ၁၀ ဦး ထပ်တွေ့ပါတယ်ဝမ်းနည်းရင်နင့်စရာ သတင်း …
ဒီနေ့ သေဆုံးတဲ့သူ ၁၀ ဦး ထပ်တွေ့ပါတယ်ဝမ်းနည်းရင်နင့်စရာ သတင်း … မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ သဲဖြူကုန်းရွာ ကြေကွဲစရာမြင်ကွင်းတွေပါ ။ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အားလုံး သိအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ယနေ့ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးထပ်တွေ့ပါပြီ ။တချို့အိမ်တွေ တစ်မိသားစုလုံးနီးပါးသေဆုံးကြပါတယ်တဲ့။ တောင်ပြိုမြေခဲတွေအောက်မှာလူတွေ အိမ်တွေ […]
မွန်ပြည်နယ်က နာမည်ကြီး ဇင်းကြိုက်ရေတံခွန် ရဲ့ ရေလုံးကြီးများနှင့်ဇင်းကျိုက်မြို့ အခြေအနေ ( ရုပ် သံ )
ရေကြီးနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်က နာမည်ကြီး ဇင်းကြိုက်ရေတံခွန် ရဲ့ ရေလုံးကြီးများ ရုပ်သံ ဒီအတိုင်းမှ မိုးအင်မတန်ကောင်းတဲ့ ဒေသတေဖြစ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ ဒီနှစ် မုတ်သုန်မိုး မုန်တိုင်းမိုးတွေကြောင့် မြစ်ရေများလျှံတက်တဲ့အပြင် 9.8.2019 နံနက်ပိုင်း 1နာရီခန့်ကနေ စတင်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ အလွန်အားကောင်းတဲ့မိုးကြောင်း သေကြေပျက်စီးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ ကြောက်မယ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရွာသွန်းတဲ့မိုးကြောင့် တောင်တွေပြို၊ […]